ला लिगा : घरेलु मैदानमा बार्सिलोनाको सानदार जित - शुभयुग
subhayugsubhayug.comकेपी शर्मा ओलीप्रधानमन्त्रीनेपाल कम्युनिष्ट पार्टीनेकपा एमालेनेकपाCorona Virus
ललिता निवास जग्गा प्रकरण : दीप बस्न्यातलाई ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश
प्रधानमन्त्रीले बोलाए संवैधानिक परिषदको बैठक : सभामुख नजाने
आज ९ हजार १९६ संक्रमित थपिए : ५० जनाको मृत्यु
कोरोना संक्रमणबाट अन्डरवर्ल्ड डन छोटा राजनको मृत्यु
सुनचाँदीको मूल्य वृद्धि : आज कतिमा कारोबार ?
२ अर्ब बराबरको ऋणपत्र निष्काशन गर्दै एनएमबि बैंक : व्याजदर कति ?
‘तालु खुइलेका मानिसहरुमा कोभिड जोखिम दुई गुणा उच्च’
भ्रममा नपर्नुस् , कुनै सहमति भएको छैन : वरिष्ठ नेता नेपाल
संयुक्त गठबन्धनका तर्फबाट डा.खिमलाल देवकोटाको उम्मेदवारी दर्ता
ओली पक्षबाट बादलले पाए टिकट : हेलिकोप्टर चढेर उम्मेदवारी दर्ता
राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता : अन्तिममा किन पछि हटे बादल ?
माधव नेपाल बाहिरिएपछि फेरी शीतल निवासमा ओली पुगे
नेकपा नेता राजेन्द्र पाण्डेमाथीको मिथ्या लान्छनाले उनको रौँपनि हल्लिँदैन
ला लिगा : घरेलु मैदानमा बार्सिलोनाको सानदार जित
न्युज डेस्कप्रकाशित मिति: २०७८ बैशाख १०, शुक्रबार (२ हफ्ता अघि)
३१२ पाठक संख्या
एजेन्सी – स्पेनिस ला लिगामा गएराती भएको खेलमा क्याटलान क्लब बार्सिलोनाले आफ्नै घरेलु मैदानमा गेटाफेमाथि सानदार जित हासिल गरेको छ ।
क्याम्प नोउमा भएको खेलमा बार्सिलोनाले गेटाफेलाई ५ – २ ले हराएको हो । बार्सिलोनाको लागी मेस्सीले दुई तथा रोनाल्ड एराउजो र एन्टोइन ग्रिजमनले एक गोल गरेका थिए । एक गोल भने उपहार पाएको थियो । गेटाफेका लागी इनेस युनालले एक गोल गर्दा एक गोल उपहार पाएको थियो ।
खेलको आठौं मिनेटमा बार्सिलोनाले कप्तान लियोनेल मेस्सीको गोलबाट अग्रता लिएको थियो । १२औं मिनेटमा क्लेमेन्ट लेङ्लेटले आत्मघाती गोल गरेपछि खेल १–१ गोलको बराबरीमा पुगेको थियो । २८औं मिनेटमा सोफियन चाक्लाले आत्मघाती गोल गरेपछि बार्सिलोना खेलमा २–१ ले अघि बढ्यो । ३३औं मिनेटमा कप्तान लियोनेल मेस्सीले व्यक्तिगत दोस्रो तथा टोलीका लागि तेस्रो गोल गर्दै बार्सिलोनालाई पहिलो हाफमा ३–१ ले अघि बढाए । ६९औं मिनेटमा इनिस युनालले गोल गर्दै खेललाई ३–२ को अवस्थामा ल्याए ।
८७औं मिनेटमा रोनाल्ड एराउजोले मेस्सीको पासमा गोल गर्दै बार्सिलोनालाई जिततर्फ अघि बढाए । इन्ज्युरी समयको थप गरिएको तेस्रो मिनेटमा एन्टोइन ग्रिजमनले पेनाल्टीमा गोल गर्दै बार्सिलोनालाई ५–२ को फराकिलो जित दिलाए ।
यस जितसँगै बार्सिलोना ३१ खेलबाट ६८ अंक जोडेर तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ ।
थाइल्यान्डमा मास्क नलगाउँदा प्रधानमन्त्रीलाई तिराइयो जरिवाना, ओलीले पनि तोडेका थिए नियम !
भारतमा एकैदिन २८ सयको मृत्यु, ३ लाख ५४ हजार बढी संक्रमित